Adeegyada hal-joogsi ah, ee mudan in lagu aamino
Taageerada emaylka sinoocean@shippart.net
Wac Taageero 0086- (0) 335-5913678
Qalabka naaftada & koronto dhaliyaha
Piston & Piston ul
Santuuqa alaabada wax lagu cuno
Jasiiradda silsiladda & jaakadda qaboojinta
Diiwaanka tusiyaha & Furitaanka waalka
Rotor usheeda dhexe Dhameystiran
Labyrinth Gas iyo Sealing bush
Kombaresarada hawada oo dhameystiran
Nuugista cadaadiska sare & Qalabka qiiqa
Bistoolad & giraanta bistoolada
Isku xidhka usha
Isku xidhka qolofka dhalida
Sifeeyaha oo dhameystiran
Gawaarida taagan iyo jiifka
Qalabka dayactirka ee kale
Mishiinka oo dhammeystiran
Qalabka kale ee Haydarooliga
Kombaresarada qaboojiyaha hawada
Wheel inducer iyo Blade
Tan iyo markii la aasaasay 1995, Sino-ocean Matine had iyo jeer waxaa ka go'an inay bixiso habeyn iyo xirfad hal adeeg oo loogu talagalay warshadaha badda. Ka dib 25 sano oo horumar ah, waxay hadda u korodhay ganacsi dhammaystiran oo ururiya qaybaha dayactirka 'keenista, farsamaynta iyo dayactirka, dayactirka markabka, taageerada farsamada iyo qalabka dhismaha maraakiibta oo wada socda. shirkaddu waxay haysay xiriir iskaashi dhow oo lala yeesho soosaarayaasha matoorrada waaweyn iyo warshadaha hoosaadyada adduunka oo dhan. Shirkaddu waxay caan ku tahay isha wax lagu iibsado ee lagu kalsoon yahay, tayo sare leh oo deggan iyo qiimo macquul ah.
Waxaan bixinnaa noocyo badan oo asal ah (OEM) iyo qaybo dayactir oo shati leh iyo shirar loogu talagalay inta badan hawo-mareenada badda iyo qaboojiyayaasha noocyada kala duwan, iyo sidoo kale cutubyo kombaresarada dhameystiran.
Qaybaha kombaresarada waxaa loo keenaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha iyo qaabab kala duwan, oo cusub iyo dib loo cusbooneysiiyay. Dhammaantood waa la tijaabiyaa oo waxay leeyihiin dammaanad hawlgal oo ugu yaraan 6 bilood ah.
Waxaan u soo bandhigi karnaa silsiladda hawada ee ugu weyn, sida soo socota:
Ku habboon JP SAUER & SOHN - taxanaha WP.
Ku habboon SPERRE - HV iyo taxanaha HL.
Ku habboon TANABE - dhammaan noocyada oo buuxa.
Ku habboon HATLAPA - L iyo W taxane.
Ku habboon HAMWORTHY - SF, TF, TM iyo V taxane.
Ku habboon YANMAR - dhammaan noocyada oo dhan iyagoo buuxa.
Hore: Bistoolad & giraanta bistoolada
Xiga: Nuugista cadaadiska sare & Qalabka qiiqa
Cinwaanka: Lambarka 7 Wenquanhu Road, QETDZ, Qinhuangdao, Gobolka Hebei, Shiinaha
KHILAARKA QALABKA QALABKA EE SINO-BIYAHA ...
LIISKA KHAYRAADKA KU HABOON WARSILA PISTO ...
Lowska, Wareeg, Wareega Giraanta,